Wadiilka uu dhisayso daqsashada ee dibadda u soo baxsanka u gaarka ah - China Boegger - China Boegger
Waxaad halkan tihiin:Guri > Products > Architectural Mesh > Goobta codsiga ah>Wixid la xiriirta
Dadka la xiriirta ee uu si gaar ah ee uu u sameeyn karaa dabayl, aluminium, Loobad ama alaab kale. Dadka daboolka ee biyaha ee biirka ah waxay u qabtaan indhaha ee sameeyaasha hore. Waxaa u isticmaalaa sidii daad, guri lacagta ee guryaha cunta, iskuulka hoteelka, qorshiisa ah, Goobaha duugga iyo deeysiga ammaanka ee badbaadada.
Shaqada la xiriirta ee la xiriirta
Goortaasha ee guurka ah
Qaarkooda ee ee uu uu uu uu uu uu uu uu uu uu uu uu uu uu uu uu uu uu uu uu u yaqaaleyso. Waxbarashada ee la xiriirta, shahaadada khaar ah, midibo kala duduwan, daawada da'aanta iyo raaxadda, Waxbarashada guryaha ee birta ah ayaa laga bixiyaa sii raad ah dhismooyinka. Markii la isticmaalo sidii daad, wuxuu bixiyaa dabool kala duduwan midib ah oo iftaadna siiyaa fikirka aan xad-dhaw.
Dadka lacag lacagta ee daran.
Jiilka ee daran oo lacag leh.
Wada shaqada ee daad ah.
2. waxaa lagu isticmaalaa kaalmooyinka, gashooyinka, shimiikaal, cunto, dawlada, fasaxa mashinka iyo shaqo kale.
3. waxaa looga isticmaalaa diyaariya, daahiriyaya, xiriirka, xirfada biyaha, dehumidifier, shirkadda, iyo shirkad. waxaa habboon yahay uu kala dudubooyinka, loo soo qaado boodka iyo looga baahan.
Codsiga: waxaa lagu isticmaalaa si aad u dhaqdhaqaaqaysa fibarka ee kii kii kimikaalka, fibarka ee uu uu uu codsaneysaa, dabka, Dhibaatooyinka ee aan daboon iyo midho kale.
Mashinka lagu codsaneya Qarruurta dhaqada ah iyo dabka aan u dhacayn.
Waxaa habboon in laga sameyso boqoton bateriya iyo shabakada. Shayaxada, gashooyinka, shirkada shimiikaal, cunto, daawaadka, dhaqaalaha mashinka.
Horey:Aasaasiga birta fidiyay
Dadka la xiriirta waxaa looga isticmaalaa guryaha waxbarashada iyo hoteelyada ku yaal saamed wanaagsan ah.
Wixid la xiriirtaWaxaa loogu qaaday guriga iyo guriga, si kastaba guriga, guriga ama xirfadeeda, maxaa yeelay, midibkeedii bir ah oo wanaagsan ah, Shaqada wanaagsan, fashiis iyo xirfadaha kale ee waxy...
Waa maxay dhiso?
DiiskaLacagsashadaWaa jidhka dibadda dhis ah, iyo midkaas waxaa ka mid ah dhaqaalaha dhamaanta iyo alaabta daboolaha dhismaha. Lacagta waxaa loogu talagalay u adeegaa qasab iyo shaqaalaha. Waxaa looga...
Safaarada ee daqsashada dibadda ah
Nasaarka dibadda ahQeybta waxaa ka mid ah derbigeed, albaabooyinka dibadda iyo daaqado, balkoni, plinth, salta rugta ah, shirkad iyo daboolka, eeShaqada daqsiga dibadda waa in la xiriirta dhismaha wey...
Shaqaalka ee dadyada guryaha sare waa sida socd
Kaalmada shaqadaDadyada la xiriirtaWaa sida socda:Shaqo 1: guryaha. Taasoo la odhaneyso waa isticmaalii dabaylka biirka ee uu ka hortay dabaxada ee dibadda uu dowladda derbi. Tusaale ahaan deriga labe...
Maseyso uu sameeyso dhismooyinka uu sameeyaa sidii socda
Usuulka samaynkaDhisashada dhiskaWaa sida socda:Intii 200 sannadood ka hor, dadka waxay u malayn karaan in buuraha, jidhka iyo lamadooyinka ay yihiin sidaas weligeed ah dhulka. Laakiinse haatan waxaan...
Sidee u yahay baabuurta dibadda?
Sidee u yahay baabuurta dibadda?WaxDeeganaEe gaarmooyinka ee uu daboolayso, daaqada, guriga ee jidhka ee jidhka ee jidhka ee baahalka iyo giraanira. Waxyaabaha weyn:(1) ehDadka gaar ah ee goobta boodk...
Dadyada la xiriirta
Dadka ee guryaha ee guryaha ee guryaha ee guriga iyo guriga. Waxaa laga sameysaa biyaha kala duduwan, wuxuuna waa nooc cusub ee waxyaabaha ee waxyaabaha ee saaxiibka ah.Wixid la xiriirtaWaxaa leh siiy...
Buuska ee Mash
Buuska ee MashDegin ahHaddii aad ka sameyso gurigaaga ama ganacsi ama aad u dhisayso waxbarashada, inta badan waxaannu illoobo inaannu u fiiriro oo u qabanqaabinayaa qorsheed waxyaabaha. Safka daahir ...